WandaVision episode 7 inodonha uye zuva rekuburitsa: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino - Pop-Tsika
WandaVision episode 7 inodonha uye zuva rekuburitsa: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino
Chikamu cheWandaVision 7 chakarongerwa kuburitswa muna Kukadzi 19, 2021, kubva pakati pehusiku Pacific Nguva, uye vateveri vauya nedzidziso dzekupenga.
#WandaVision episode 7 kufanotaura: mainjiniya Monica ari kureva ari kuzove Reed Richards. Ndiani achatambwa naJohn Krasinski. pic.twitter.com/PCpRXgMKuL
- Guvvy Atwal (@GuvvyA) Kukadzi 12, 2021
Zvinoenderana ne 4channel kudonha , episode yechinomwe yakagadzirirwa kusiya vateveri vachishamisika nezve boka rezvakazarurwa zvitsva nezvinonakidza. WandaVision yaita mushe mushe nezvikamu zvitanhatu zvekutanga, ny ichiita kuti vateveri vafarire nezviitiko zvezvino muMarvel Cinematic Universe.
hukama hunogona here kushanda mushure mekuparadzana kwakawanda
Kunyangwe iwo akateedzana akateedzera pane inosetsa noti, ivo vagadziri vakaita zvakanaka chaizvo kupinza inonakidza-senge ambience mune iyo nyaya yese.
sei kunonoka kudonha murudo
ndakafara kwazvo wandavision episode 7 pic.twitter.com/gMh6OCnjFW
- mweya (@filmjolnir) Kukadzi 18, 2021
Kuwedzera, maererano ne Reddit post pane iyo r / MarvelStudiosSpoilers subreddit naiwe / Plenty_Echidna_544 , chikamu chechinomwe chinofanirwa kunge chakareba maminetsi makumi matatu nemasere. Izvi zvinoreva kuti chikamu chinouya chichava chakareba maminetsi mana kupfuura icho chakatangira.
Ongorora: Chikamu chinotevera chine vangangopamba veWandaVision Chikamu 7. Zvisinei, zano rekutanga reChikamu 7 harina kuburitswa panguva yekunyora.
WandaVision Chikamu 7 chinodonha
Kumwe kwekubuda kukuru kwakaburitswa nedzidziso dzepamhepo WandaVision ndeyekuti Agnes, muchokwadi, ndiAgatha Harkness - mumwe muroyi ane simba anobva kuMarvel Comics uye anozopedzisira ari chipangamazano weScarlett Witch. Nekudaro, kune akawanda mafungire ekutsigira iyi chaiyo fungidziro. Zvikonzero zvinosanganisira:
Agatha Harkness ndiye amai vaNicholas Scratch, mutambi ane mukurumbira kubva mumakomiki ane hunhu hunopesana neVane Anoshamisa Vane. Agnes akataura zita remhuka yake yemhuka tsuro kubva kuWandaVision sa'Senor Scratchy, 'zvinogona kureva mwanakomana wake.
Agnes ataurwa muchiitiko panguva yechikamu chechishanu kana Wanda aida kuita zvekare 'chiitiko,' zvichiratidza kuti hunhu hunonyatso ziva hex yaWanda nezvose zviri kuitika muWestview.
Jimmy naDarcy pavakanga vakabatikana kuzivisa munhu wese kubva kuWestview nehunhu hwavo chaihwo hwepasi, kuzivikanwa kwaAgnes kwakaramba kusingazivikanwe. Tichifunga kuti Agatha Harkness ane nhoroondo neSalem Witch Trials kubva muna 1692, anogona kunge aine mazana emakore.
Izvo zvakanongedzerwawo pamusoro pechiitiko chechiratidziro chekuti zuva rekuzvarwa raAgnes riri muna Chikumi 2. Zvakangoitikawo, June 2 zvakare izuva iro Bridget Bishop akazove mukadzi wekutanga kumhan'arwa zviri pamutemo kuhuroyi. Rimwe zuva rakakurumbira munhoroondo yeSalem Witch Trials.
Dzimwezve runyerekupe dzakaratidzawo kuti murume waAgnes 'Ralph,' uyo achiri kuzoonekwa pachiratidziro anogona kunge ari Mephisto. Nekudaro, hapana zvakawanda zvirevo kana humbowo hwekutsigira iyi dzidziso izvozvi.
Tichifunga kuti Agnes zvechokwadi Agatha Harkness, WandaVision episode yechinomwe inogona kunge iri dombo rakatsika pazvikamu zviviri zvekupedzisira zvemwaka.
Kubva pakuita hurukuro nezve zviri kuitika muWestview neChiratidzo, kusvika pakuchinja kuita chinzvimbo cheMudzidzisi waWanda, rondedzero yemikana yekubatanidzwa kwaAgatha Harkness muchikamu chechinomwe che WandaVision haaperi.
sei ndisingade sevanhu
ndakabiridzira uye ndinonzwa ndine mhosva
sei kuudza kana ari mukati mako
sasha mabhanga vs bianca belair
murume wangu haachandida
roman anotonga kuhwina wwe shasha